नेपालको स्वर्णकाल: जुनवेला 'संस्कृत भाषा' राष्ट्रिय भाषा थियो | Citizen Post News
नेपालको स्वर्णकाल: जुनवेला 'संस्कृत भाषा' राष्ट्रिय भाषा थियो
नेपाल र भारतका प्रायः सबै भाषा संस्कृत भाषामा आधारित छन् । संस्कृत भाषा हामी सबैको निकट जननी भाषा हो । अहिले नेपालीहरू भाषा पीडित बन्दै गएको देखिदै छ । भाषा बुझेर, पढेर, बोलेर मात्र पुग्दैन , यसमा कमाण्ड हुन सक्नुपर्छ । नेपालीहरूमा अहिले न नेपाली भाषामा, न हिन्दीमा, न अंग्रेजी, न अन्य प्रमुख नेपाली भाषाहरू (मैथिली, हिन्दी, नेवारी, मगराती, तमू थारू, अवधी, भोजपुरी, शेर्पा, डोटेली ) मा कमाण्ड देखिन्छ ।
अनि यी सबै भाषीहरू बीचमा नेपाली भाषाले सम्पर्क भाषाको भूमिका खेल्दैछ । तर पनि नेपाली भाषा विज्ञान, प्रविधि, दर्शन, अध्यात्म, व्यापार ब्यावसाय, अर्थतन्त्रको भाषा बन्न सकिरहेको छैन । जबसम्म कुनै भाषा यी सबै क्षेत्र, विषयमा पूर्ण हुने अवस्थामा पुग्दैनन्, तबसम्म हामी बिदेशी भाषामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । यदि हामी हाम्रै भाषामा कमाण्ड गर्न चाहने हो अथवा विश्वका बिकसित देशका भाषालाई टक्कर दिन चाहने हो भने एकमात्र विकल्प संस्कृत भाषालाई लोकप्रिय भाषा बनाउनुपर्छ ।
संस्कृत भाषामा सबै कुरा सुसभ्य र सटिक अभिव्यक्त गर्ने सामर्थ्य रहेको छ । किनभने यो हजारौ वर्ष अघिनै पूर्ण बिकसित भैसकेको तर हामीले बेवास्था गरेको समृद्ध भाषा हो । उपत्यकामा लिक्षवी कालमा संस्कृत राष्ट्रिय भाषाको मान्यता थियो र सबै कुरा यही भाषामा गरिन्थ्यो । संस्कृत शिक्षित पण्डितहरूको संचार शास्तास्त्र गर्ने भाषा थियो, भारतीय उपमहादेशमा । त्यसैले लिक्षवीकाल नेपालको स्वर्ण काल मानिन्छ, जुनवेला संस्कृत भाषा नेपालको राष्ट्रिय भाषा बनेको थियो ।
हाम्रा पुर्खा, ऋषिमुनि, आचार्य, योगी, पण्डित गुरूहरूले अथाह र हजारौं वर्षका निम्ति पुग्ने ज्ञानरूपी सम्पत्ति दिएर गए । त्यसलाई हामीले उपयोग गर्ने कुनै प्रयत्न न हिजो गर्यौ, न आज गर्ने सुरसार देखाउदौं छौं । कुनै अध्ययन, चिन्तन नगरी अझ उल्टो ती ऋषिमुनिले केही गरेनन् , कल्पना मात्र गरेका हुन्, तीनले पकाएर, चबाएर हाम्रो मुखभित्र छिराई दिएनन् भन्दै रोईलो गर्ने, दुत्कार्ने, धिक्कार्ने र परायाको जय जयकार गर्न खोजीखोजी बिकृत प्रायोजित साहित्यलाई साईटिंग गर्ने कथित नेपाली बौद्धिक जमात देख्दा हामी कति नालायक सन्तति हुन पुगेछन् भन्ने प्रमाणित मात्र गरिरहेको हैन र ?
आफू अन्धभक्त तथा अन्धविश्वासी हुने, आफ्ना पूर्खाहरूलाई सराप्ने जमात अहिले नेपालमा बग्रेल्ती छन् । त्यस्ताले नेपाललाई अरूले भन्दा बिकृत र बर्वाद पारिरहेको महसुस हुन्छ । तिनको आँखा खोलिदिन जरूरी भएको छ । ती समाजका बिषघोलक जस्ता बनेका छन् । नेपालका राजनीतिक नेताहरूमा कुनै खास विद्या, ज्ञान, पेशा, विज्ञता वा राजनीतिक सुसंस्कार र राजकाज विद्यायुक्त रहेका पाईदैनन् । ती जहिले पनि विद्यमान राजनीतिक संरचना र व्यवस्था भत्काउने सीपमा मात्र पारंगत भएर नेपालका कथित ठूला नेता बनेका मात्र हुन् ।
हामी नेपाली पनि आफ्ना भविष्यका लागि नयाँ नेता हैन कि, नेताको बिगतका ईतिहासका आधारमा पुरानालाई नै चुन्ने संस्कार भएकोले नेपाल चॉडै उभो लाग्ने कुनै आधार र विश्वास आजसम्म जाग्न नसकेको हो । अब यदि यी आधारहरूमा कुनै परिवर्तन आए र विषय-व्यवसायमा पारंगत विज्ञ नेताहरू चुन्ने संस्कार बिकसित हुदै गयो भने नेपालले छलांग मार्न सक्ने प्रचूर संभावनाहरू भने विद्यमान छ । नेताको नश्ल र जनताको संस्कारमा क्रान्ति जरूरी छ । मुलुकमा कुनै वाद वा राज्यसंरचना भत्काउने र पछि उही पूरानै संरचना पुनर्जिवित गरेर महान नेता बनियो भन्ने दुष्चक्रबाट मुक्ति चाहिएको छ । (लेखक : उपाध्याय पूर्वसचिव हुन् )
कालीपानी प्रकरणः 'रियाक्सन होइन, एक्सनको प्रतिक्षा भइरहेको छ'
२०७६ मंसिर १ गते १५:२०
प्रहरी चौकीको बरण्डाबाट हामफालेर भाग्न खोज्ने सैनिक जवानको मृत्यु
२०७६ मंसिर १ गते १३:४२
जानौंः बास्तबिक सौन्दर्य के हो ?
प्रत्येक पाँच बर्षमा लाग्ने चर्चित गढीमाईको मेला आजबाट सुरु
२०७६ मंसिर १ गते १०:४१
एसएसबी नै भागे, अतिक्रमित भूमिमा राष्ट्रिय झन्डा फहराइयो
२०७६ मंसिर १ गते ०९:४९
२ लाख ५९ हजार रुपैयाँसहित ६ जना जुवाडे समातिए
२०७६ कार्त्तिक ३० गते २१:३९
भागेर मध्यराति नाइट क्लब 'लड' मा जाने चार खेलाडी हटाईए
२०७६ कार्त्तिक ३० गते २०:५९
अध्याधुनिक हतियार ५ एसएमजीसहित ३९० राउण्ड गोली प्रहरी कब्जामा
२०७६ कार्त्तिक ३० गते १२:४२
सम्पादक शिवाकोटी 'ईन्जा साहसी पत्रकारिता पुरस्कार' बाट पुरस्कृत
२०७६ कार्त्तिक २९ गते २१:५०
पर्सा प्रहरीको निशानामा अवैध हुण्डीका कारोबारी
२०७६ कार्त्तिक २९ गते २१:१९